कोरोनाले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता प्रभावित भएको छ «
कोरोनाले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता प्रभावित भएको छ
सुधिर शर्मा, प्रमुख, कन्जुमर प्राइभेट एण्ड विजनेस बैंकिङ, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल
स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका कन्जुमर, प्राइभेट एण्ड विजनेस बैंकिङ प्रमुख सुधिर शर्माले सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा ग्रिण्डलेज बैंकबाट आफ्नो करियर सुरू गरेका हुन् । तीन दशकदेखि लगातार उपभोक्ता कर्जा, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, रिकभरी, डिजिटललगायतका क्षेत्रमा विभिन्न शाखामा काम गरेका शर्मा बैंकको रणनीतिअनुरुप विभिन्न सूचकको लक्ष्य भेट्न मरिमेट्ने बैंकर हुन् । नेपाल बैंकर्स संघअन्तर्गतको कार्ड इण्डष्ट्रि काउन्सिल अफ नेपालका अध्यक्ष पनि रहेका शर्मासँगको कुराकानीको सार :
हाल बैंकहरुले कन्जुमर फाइनान्सिङजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा दिए भन्ने नीति निर्माताहरुको आरोप छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला यस्ता क्षेत्र पनि नमर्ने तथा उत्पादक क्षेत्रमा पनि कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने ?
बैंकहरुले सधै वयक्तिगत तथा व्यावसायिक दुवै क्षेत्रको लागि आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । बैंकले यसरी उत्पादकत्व बढाउन व्यवसाय प्रवद्र्धन वा सहयोग गर्दा प्रत्येकको आजश्यकता तथा प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सधैं नियामक निकायद्वारा निर्देशन भए बमोजिम देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने हो । त्यसैले कन्जुमर फाइनान्सिङले पनि वित्तीय परिचालन गर्न मद्दत गर्दछ । जसबाट व्यक्तिगत तहमा पनि पुँजी निर्माण तथा सहयोग पुग्दछ । जुन समग्रमा अर्थतन्त्रको लागि नै सहयोगी हुन्छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको असर नेपाली बैंकहरुमा प-यो । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कन्जुमर फाइनान्सिङ त बन्द नै भयो । यसले बैंकको व्यवसायमा कस्को प्रभाव पारेको छ ?
कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बेला नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । यसले व्यक्तिगतरूपमा आम्दानीमा पनि प्रभाव पारेको छ । जसका कारण उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता तथा प्रवृत्तिमा पनि असर परेको छ । धेरै जसो ग्राहकले त आफ्ना लागनीका योजनाहरु पनि परित्याग गरेका छन् वा योजना पछि सारेका छन् । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायमा असर परेको छ ।
यस पटकको निषेधाज्ञाभन्दा अगाडि बिस्तारै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सुरु भएको थिए । विस्तारै बजारमा ऋणको माग बढ्दै थियो । हामी बिस्तारै आशावादी हुँदै थियौं । तर अचानक फेरि यो दोस्रो लहरले केही असर गर्ने देखियो । हेर्दे जाउँ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र कन्जुमर फाइनान्सिङ नै हो भनिन्छ । सहकारीदेखि फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक अनि वाणिज्य बैंक, सबैको मुख्य आय कन्जुमर फाइनान्सिङ नै हो ?
तीव्र शहरीकरण तथा एकल परिवार बढ्दै गएका कारण मानिसको वित्तीय आवश्यकता पनि बढ्दै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय निर्देशनबाट परिचालित हुन्छन् । समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने निर्देशनलाई मान्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन भएका छन् । नियामकले बेला बेलामा दिएका यस्ता निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि सेवा प्रदान गर्दा पालना गर्नु पर्ने नियम तथा सेवा शुल्क, तथा अन्य शुल्कहरु पनि तोकिदिएको छ । बैंकले आफना ग्राहकलाई सेवा तथा सेवा शुल्क तथा अन्य जानकारी पारदर्सीरूपमा यी सेवा प्राप्त गर्नु अगाडि नै दिएको हुन्छ । बैंकले आफ्नो आधार दरको अनुसार ऋणको ब्याज लिन्छ र ग्राहकको अनुमति तथा जानकारीमा मात्रै ती परिवर्तन हुन्छन् । साथै बैंकले राष्ट्र बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको अनसरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको नियामकीय संरक्षणमा पारदर्सीरूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । ग्राहकको बढ्दो आवश्यकताअनुरुप साना साना कन्जुमर फाइनान्सिङका सेवा प्रदान गर्दा कति छिटो ऋण स्वीकृत हुन्छ र ग्राहकको आवश्यकता कति परिपूर्ति हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी त्यसैमा भर पर्दछ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन कन्जुमर फाइनान्सिङमा नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन सकेनन् ?
नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने काम निरन्तरको प्रयासमा हुने हो । तर हरेक सेवा वा प्रोडक्टको डिजाइन गर्दा ग्राहकको आवश्यकता तथा नियामकको निर्देशनको अधिनमा रहेर गरिएको हुन्छ । स्टयान्डर्ड चार्टर्डको कुरा गर्ने हो भने यसका सेवा वा प्रोडक्ट विभिन्न बजार तथा ग्राहकका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गरिएको छ । हाम्रो बैंकले दिने विभिन्न सेवा तथा प्रडक्टको विकास तथा बजारको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन पनि हुँदै गएको छ । त्यसैगरी ग्राहकको आवश्यकता तथा बजारमा चाहना अनुरुप डिजिटल आवश्यकताको महसुस गरेर बैंकले विभिन्न डिजिटल समाधानको पनि विकास गर्दै गइरहेको छ ।
स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको समग्र कर्जामध्ये कन्जुमर फाइनान्सिङले कत्ति हिस्सा ओगट्छ ?
स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक घर कर्जा, सवारी साधन कर्जा, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्डजस्ता नेपालको कन्जुमर फाइनान्सिङका विभिन्न सेवामा हरेक दृष्टिकोणबाट पहिलो बैंक हो । कूल कर्जमा कन्जुमर फाइनान्सिङको ५० प्रतिशत हाराहारीको हिस्सा छ ।
स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कन्जुमर फाइनान्सिङमा के नयाँ प्रोडक्ट छ, वा आउँदैछ ?
अगाडि नै भनिए झैैं ग्राहकको आवश्यकताअनुरुप नयाँ–नयाँ सेवाहरु निममितरूपमा विकास गर्दै प्रवद्र्धन गर्दै जाने बैंकको नीति हो । हामी केही नयाँ सेवाको तयारीमा लागिरहेका छौं ।
#प्राइभेट एण्ड विजनेस बैंकिङ